100G QSFP28 Vagadziri | China 100G QSFP28 Fekitori & Vatengesi
HUA-QS1H-3110D yakafanana 100Gb / s Quad Diki Fomu-chinhu Chinogoneka (QSFP28) optical module. Iyo inopa yakawedzera port density uye yakazara system mutengo kusevha. Iyo QSFP28 yakazara-duplex optical module inopa 4 yakazvimirira kutumira uye kugamuchira chiteshi, imwe neimwe inokwanisa 25Gb / s mashandiro ehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwe100Gb / s pa10km yeiyo imwe mode fiber.
HUA-QS1H3140D QSFP28 transceiver module yakagadzirirwa 100 Gigabit Ethernet zvinongedzo pamusoro pe40Km imwechete mode fiber. Dhijitari yekuongorora mabasa anowanikwa kuburikidza neI2C interface, sezvakatsanangurwa neQSFP + MSA. Uye inoenderana ne100G 4WDM-40 MSA.
HUAQ100Z yakagadzirirwa 80km optical kutaurirana kunyorera. Iyi module ine 4- lane optical transmitter, 4-lane optical receiver uye module management block inosanganisira 2 waya serial inter- kumeso. Iwo manyowani masaini akawedzeredzwa kune imwechete-modhi fiber kuburikidza neindasitiri yakajairwa LC yekubatanidza. Dhirowa dhizaini inoratidzwa muMufananidzo 1.
Sfp C ++, Xfp Transceiver, Huawei Qsfp +, Optical Fiber Module, Huawei Olt Mutengo, External Modulation Transmitter,